အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း - - FileCatalyst ဗဟိုနှင့်တိုက်ရိုက်ပေးဖို့ Feature ကို-Rich Update ကိုဆောင်ကြဉ်း NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » FileCatalyst ဗဟိုနှင့်တိုက်ရိုက်ပေးဖို့ Feature ကို-Rich Update ကိုဆောင်ကြဉ်း
FileCatalyst ဗဟိုနှင့်တိုက်ရိုက်ပေးဖို့ Feature ကို-Rich Update ကိုဆောင်ကြဉ်း
အော့တဝါ, ON - FileCatalyst, မြန်အောင်လုပ်ဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းချက်အနိုင်ရEmmy®ဆုဖန်တီးသူ, သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထုတ်ကုန်မှဗားရှင်း 3.7 များလွှတ်ပေးရန်ထုတ်ပြန်ကြေညာ FileCatalyst တိုက်ရိုက်။ သူတို့ကအစ, ၎င်းတို့၏ဗဟိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခု 3.7 update ကိုဖြန့်ချိခဲ့ကြ FileCatalyst ဗဟို။ ဗားရှင်း 3.7 မြန်ဆန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်မသက်ဆိုင်အရွယ်အစား, အောင်းနေချိန်သို့မဟုတ်ကွန်ရက်အခြေအနေများ၏ secure ဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့၏ဖောက်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရေးပါဖိုင်လွှဲပြောင်းပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါ update ကိုပင်ပိုပြီးသား feature ကြွယ်ဝ suite ကိုမှဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းပေးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်တစ်ဦးချီးမြှင့်ခံထိုက်ဖြေရှင်းချက်ကိုခြုံငုံအတွေ့အကြုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
FileCatalyst တိုက်ရိုက် 10 Gbps အထိအမြန်နှုန်းမှာ Point-to-point အရှိန်ဖိုင်လွှဲပြောင်းပေး client နှင့် server application များတဲ့ suite ကိုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 3.7 update ကိုအသုံးပြုသူများကအတွင်းကနေ TranferAgent Express ကိုမူတည်ပြီးမှခွင့်ပြု FileCatalyst လွယ်ကူသောကြော်ငြာ-hoc ဖိုင်လွှဲပြောင်းဘို့ခွင့်ပြု, direct ။ FileCatalyst တိုက်ရိုက် 3.7 လည်းဝဘ်ပေါ်တယ်မှတဆင့်သို့မဟုတ်တစ် system ကိုဗန်းအိုင်ကွန်မှတဆင့် TransferAgent ရရှိနိုင်စေသည်။ အဆိုပါ update ကိုထပ်မံက Windows ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် install လုပ်သည့်အခါတစ်ဦးဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် TransferAgent install လုပ်နိုင်စွမ်းအဖြစ်ကောင်းစွာ, Linux ကိုထောက်ခံကြောင်းဖြည့်စွက်, စီမံခန့်ခွဲသူခွင့်ပြုချက်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့် TransferAgent တိုးတက်ခဲ့သည်။
FileCatalyst တိုက်ရိုက် 3.7 တစ်ခုကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ် လွန်စွာလိုလားသော အင်္ဂါရပ်များက၎င်း၏လက်နက်တိုက်သို့ဖြန့်ဝေ plugin ကို။ ဒီ plugin ကိုအတူအသုံးပြုသူများကိုအလွယ်တကူဖြန့်ဝေကျော်ဖိုင်များကိုကယ်မနှုတ်နိုင် လွန်စွာလိုလားသော မြန်အောင်လုပ်အမြန်နှုန်းမှာ Wide Area Network (WAN) ကိုဖြတ်ပြီးစနစ်များကို။ ပြင်ပ File System (EFS နဲ) ထောက်ခံမှုတိုးချဲ့လျက်ရှိသည်နှင့်အသစ် drivers တွေကို client များတစ်ဦးနဲ့ချိတ်ဆက်ပါစေ FileCatalyst တည်ဆဲအမေဇုံ S3 နှင့် Microsoft Azure သိုလှောင်မှုအပြင်နောက်ကျောအဆုံးသိုလှောင်မှုအပေါ် OpenStack ဆွစ်ဖ်နှင့်ဆာဗာကို Message Block (SMB) / အဖြစ်များသည့်အင်တာနက်က File System (CIFS) မှဆာဗာ။
နှင့် FileCatalyst ဗဟို 3.7 update ကို, အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ, အနီးအစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလွှဲပြောင်းရှုမြင်ငွေပေးငွေယူသမိုင်းနဲ့သို့တူး, စီမံခန့်ခွဲသို့မဟုတ်နှိုးစက်စောင့်ကြည့်, node များစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့် node ကို-to-server ကိုလွှဲပြောင်းအစပျိုးနိုင်ပါ။
တစ်ဦးကို client ရဲ့အသစ်တစ်ခုမြေပုံကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်များ၏များအပြင် FileCatalyst ဖြန့်ကျက်နေတဲ့ဖြန့်ကျက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ဖို့နည်းလမ်းသစ်ပေးပါသည်။ client များဟာသူတို့ရဲ့ဖြန့်ဝေမှုစနစ်၏စစ်မှန်သောပထဝီကိုယ်စားပြုမှုရနိုင်ဒါမြေပုံများအားအပြည့်အဝ Configure လုပ်လို့ရတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ real-time နှင့်သမိုင်းလွှဲပြောင်းစာရင်းဇယားယခု 3.7 အတွက်မဆို node ကိုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ nodes များအုပ်စုများအတွက်စာရင်းအင်းများပိုမိုအသေးစိတ်မှုဆောင်ခဲ့လည်း 3.7 နှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည် FileCatalyst ဗဟိုနှင့်ကူညီပေးနေ clients များပိုကောင်းအသွားအလာသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုပုံစံများကိုဖေါ်ထုတ်။ FileCatalyst ဗဟိုလည်း node များ, တာဝန်များကို, အစည်းအဝေးများ, နောက်ဆုံးဖိုင်တွေလွှဲပြောင်း, နှိုးစက်, bandwidth ကိုကာတစ်ချက်မှာယခုရရှိနိုင်သမျှသောအရာ၏အခြားအရေးကြီးသောစာရင်းဇယားမှပိုမိုမြင့်မားမြင်သာပေးထားတယျ။
FileCatalyst ဗဟိုယခုတစ် HTML ကို interface ကိုတဆင့်ရန်, အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ access ကိုပေးသည် FileCatalyst အတွင်းကနေ servers များနှင့် HotFolders FileCatalyst ဗဟို။ FileCatalyst ဗဟိုလည်းယခုဗားရှင်း 3.7 နှင့်အတူ TransferAgent စီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှတိုက်ရိုက်ဖိုင်တွေကို configure သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းနိုင် FileCatalyst ဗဟိုက web interface ကို။
အဆိုပါ FileCatalyst အသင်းကဒီလွှတ်ပေးရေးနှင့် ပတ်သက်. စိတ်လှုပ်ရှားသည်နှင့်သူတို့ကဖောက်သည်များနှင့်အတူရှိခဲ့သည့်အပြုသဘောဧည့်ခံနှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များအတွက်ရှေ့ဆက်တည်ရှိသည်ဘယ်အရာကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။
အေျကာင္းအရာ FileCatalyst, Inc
အော့တဝါ, ကနေဒါ, တည်ရှိသော FileCatalyst စီမံခန့်ခွဲဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်အရှိန်မြှဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းချက်တစ်ခုEmmy®ဆုရခေါင်းဆောင်တစ်ဦးရှေ့ဆောင်သည်။0အတွက် Founde2000d, ကုမ္ပဏီအများအပြား Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 ကုမ္ပဏီများမှအဖြစ်စစ်တပ်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင်တစ်ဦးထက်ပိုတထောင်မီဒီယာ & ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ဖောက်သည်များ, စွမ်းအင် & သတ္တုတူးဖော်ရေး, ဂိမ်းနှင့်ပုံနှိပ်, ရှိပါတယ်။ FileCatalyst လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖိုင်လွှဲပြောင်းအရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲဖို့ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ FileCatalyst အောင်းနေချိန်နှင့် packet ကိုအရှုံး FTP, HTTP ကို, ဒါမှမဟုတ် CIFS တူသောရိုးရာဖိုင်လွှဲပြောင်းနည်းလမ်းများအပေါ်ရှိသည်သောဆိုးကျိုးများမှကိုယ်ခံစွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကိုသုံးပါ FileCatalyst အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူး, ဖိုင်ခွဲဝေမှုများနှင့်ပြင်ပ Backup တွေကိုအပါအဝင်လွှဲပြောင်း file နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများ, ဖြေရှင်းရန်။ ပိုပြီးအလည်အပတ်ခရီးသင်ယူဖို့ www.filecatalyst.com သို့မဟုတ် Twitter ပေါ်တွင် @FileCatalyst.
စျေးကွက်အကြောင်းအရာအထူးကု at FileCatalyst
Matt Murphy တို့ကနောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
Evolphin မိမိတို့၏မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) ပလက်ဖောင်းမှန်ဘီလူးသို့မြန် File Transfer စှမျးပေါင်းစပ်ဖို့ FileCatalyst နှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖြစ်ပေါ်လာသော - ဧပြီလ 5, 2019
FileCatalyst Las Vegas မှာ NAB 2019 မှာနယူး cloud အခြေခံဝန်ဆောင်မှုနှင့် New အပ်ဒိတ်များခင်းကျင်းပြပေးပါရန် - ဖေဖေါ်ဝါရီလ 20, 2019
စားသုံးမှု-အခြေခံပြီးစျေးနှုန်းနှင့်အတူ FileCatalyst မိတ်ဆက်နယူးတိမ်တိုက်-အခြေပြုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း, FileCatalyst Spaces, - ဖေဖေါ်ဝါရီလ 6, 2019
စီမံခန္႔ခြဲမႈ လွန်စွာလိုလားသော ဖိုင်လွှဲပြောင်း ဖိုင်လွှဲပြောင်းအရှိန် ဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းချက် FileCatalyst	2017-04-27
ယခင်: DPA မိုက်ခရိုဖုန်းအော်စကာဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီးက Short Film သည်အသံ Capture
နောက်တစ်ခု: အဆိုပါ QYOU ယူနိုက်တက် Group နဲ့အရှေ့တောင်ဥရောပအတွက်ဖြန့်ချိ